Merah Trial: Joogitaanka Loo Baahan Yahay Racfaanka Ka Baxsan Kareeraha Killer - TELES RELAY
ACCUEIL » SIYAASADDA • COMPANY Maxkamadeynta Mareekanka: Abaalmarinta Loo Baahan Yahay Racfaanka Ka Baxsan Kareeraha Killer
"Hanuuniye iyo nacayb ah oo qarsoodi ah": dacwad-ku-qaadid wuxuu racfaan ka qaatay Talaadadii ka soo horjeedda xabsi daa'in Abdelkader Merah, isaga oo tixgelinaya in uu ahaa "ku-xigeen" toddobadii dil ee loo geystay walaalkiis Maxamed bishii Maarso 2012 ee Toulouse iyo Montauban.
»Akhri ALSO - Abdelkader Merah ayaa lagu xukumay xabsi labaatan sano ah
Bangiyada: qorshooyin aan caadi aheyn oo lagu qabsado bisha Abriil
Bangiyada dhowr ah ayaa bilaabay soo dhaweynta, xulashada qorshayaal wanaagsan oo la qabsanayo bisha soo socota.
Ugu maxkamad, kii walaal u yahay jihaadiga Toulouse ee lagu xukumay 20 sano oo xadhig ah ururka dembiyada argagixisada, laakiin waxaa lagu waayay ee "hirgelin lahaa", maxkamadda ka helin cadayn tusay ayuu "ogaa gool ah loo gudbiyay iyo dembiyadii uu geystay walaalkiis ".
In eedayntii ah laba codad, Xaakinnadii baa amar Rémi Crosson du Cormier iyo Frederic Bernardo loogu talagalay ee "Jidka isku" ee laba walaalo ah, "laba qof oo dhalinyaro ah oo magaalada in fartaan in qoyska ka jabay, dhadhan rabshadaha ... iyo xagjirnimada xabsiga. " Mid ka mid ah, Maxamed, "dareen diidmo ah, gardarro, diyaar u ah tallaabo"; kale, Abdelkader, "dheeraad ah oo caqligal ah" oo "caqliga arkaa waa" iyo rabitaan "mentor" oo hub gacanta dilaaga ah, xeer wuxuu ku yidhi.
Garsoorayaasha ayaa waydiistay maxkamadda in ay ku soo rogaan xukunka Abdelkader xukun of sano ammaanka 22. Waxay sidoo kale loo yaqaan for "dhexeeya 15 iyo 20 sano oo xarig ah" ka dhanka labaad eedeeyay, Malki Fattah, a "diriyaa Multicard" ee 36, lagu xukumay in marka hore si 14 sano oo xabsi ah bixinta Mohamed Merah qalabka wax lagu xirxiro iyo qori dabacsan, oo aqoon u leh xagjirnimada.
General Counsel dheeraad ah ka codsaday noqoshada labada xukumay Fijait (file iswada qaranka dembiyada ee soo maleegay dambiyo argagixiso). Abdelkader Merah, 36 sano, ayaa lagu eedeeyay "oo og" yareeyo "diyaarinta" dambiyada walaalkiis iyagoo gacan ka geysanaya isaga ka xadaan mooto iyo iibsato jaakada in la isticmaalay intii lagu jiray dhacdooyinka. Waxa uu sidoo kale ku eedeeyay of "qaybgalka koox dambiilenimo oo xiriir la leh al-Qaida u doodaya jihaadiga ah islaamaynta (...) by codsanaya isaga iyo walaalkiis Mohamed talooyinka ururkan uu isna wuxuu lahaa casharada iyo talo hawl- ". Inta u dhaxaysa March 11 19 iyo 2012 Mohamed Merah dilay saddex askari, saddex carruur ah oo Yuhuudi ah oo macallin ka ah ee Toulouse iyo Montauban, ka hor inta aan lagu toogtay on March 22 in uu guri by weerarka dhamaadka kursi Saacadaha 32 ee ay raacaan warbaahinta caalamka oo dhan.
Le Figaro iyo AFP
Xabashida ayaa loogu talagalay farmashiyada internetka